Chemical dị mma, Lacosamide, Empagliflozin - Luna
Luna chemicals Co., Ltd na-erekwa ma na-arụpụta klaasị klaasị Ọrụ Efrata na kemịkal dị n'etiti maka ụlọ ọrụ ọgwụ. Ndị otu Mmepe anyị na-elekwasị anya nke ọma na mpaghara ọgwụgwọ: akwara obi, mgbochi mkpali, nfụkasị ahụ ike, iwepụta ahịhịa. Anyị na -enye nkwado teknụzụ na akwụkwọ nhazi nke ọma maka ndị na -emepụta ihe, a na -echekwa nke ọma mgbe niile. Anyị na -enyekwa ndị ahịa na nkwado ụlọ nyocha ọpụrụiche.
4- (4-Aminophenyl) morpholin-3-otu.
kpọtụrụ anyị ka ị matakwuo gbasara ọrụ anyị
Mbupụ ọgwụ na mbubata & mbubata
Ụlọ nkwakọba ihe & Ụgbọ njem ikikere nke GSP
Ndebanye aha SFDA
Etinyela nnukwu ụlọ ọrụ na -emepụta ọgwụ
Ndị ọrụ ugbu a
Ụlọ nkwakọba ihe ikikere nke GSP
Comprehensive ọgụgụ isi ọgwụ ọgwụ equipm ...